Abwaan Weedhsame iyo Wadaadada Maxaa kala Haysta? Dhugo Sheeko Xiiso Badan oo Abwaanku ka Sameeyay isbadalka Wadaaddada. - Haldoor News | Haldoor News
Abwaan Weedhsame iyo Wadaadada Maxaa kala Haysta? Dhugo Sheeko Xiiso Badan oo Abwaanku ka Sameeyay isbadalka Wadaaddada.
“Sheekh Shariifkii soomaaliya madaxweynaha ka noqday waxa uu ahaa wadaad. Amxaarada iyo Reer galbeedkaba wuu nacdali jiray, dagaalkoodana jihaad buu ku sheegi jiray. Barbaartii 2006-dii ku madhatay dagaalkii maxkamaduhu la galeen itoobiyaanka, waxa uu ka mid ahaa culimadii guubaabinaysay ee shahiida ku lahayd da’yarta. Waase yaabe, Mar qudha uun baa la arkay sheekhii oo qolyihii uu necbaa ee gaalada ahayd hoosta kaga jira!!!
Wadaad reer soomaaliland ah ayaa beri ku fatwooday in sawirka iyo TV-guba xaaraan ay yihiin oo aan diinta islaamku ogolayn. Intii ardayda u ahayd iyo intii ayidsanayba sawirku waa xaaraan buu ka dhaadhiciyey. Muddo haddii la joogay, kuye waaba sheekhii oo TV-gii xaaraanta ahaa ka soo mudh yidhi!!
Dawladii Cabdilaahi yuusuf waxa ka hor yimi qolyo culimo ah oo waqtigaasi ku doodayey inay xaaraan tahay dawladiisu. Doodoodana waxay ku sababeeyeen amxaaro gaalo ah ayey wadataa. Waase yaabe, qolyihii halkaa taagnaa waxay taageero buuxda siiyeen Dawlada maanta soomaaliya ka jirta ee Xasan sheekh hor kacayo. Waase su,aale iyaduba saw AMISOM ma wadato maxay tii Cabdillaahi yuusuf kaga duwan tahay?
Waa su,aale ma diintaa is burinaysa mise ragga? Jawaabta ilaahay baa inoo sheegay oo diintu isma buriso laakiin ragga ayaa is burinaya. Sababta is burintooduna waa damac adduunyo. Intaa ila fahan oo indhaha kala qaad.”
Qoraalkan oo aanu ka soo Xiganay Barta Abwaanka ee Facebook-ga ayaa waxaa si wayn loogu falanqeeyay Dhibta isbadalka wadaada.